कास्कीको रुपा गाउँपालिकामा भलिबल प्रतियोगिता, संस्कृति र नृत्य उत्सव | eAdarsha.com
कास्कीको रुपा गाउँपालिकामा भलिबल प्रतियोगिता, संस्कृति र नृत्य उत्सव
पोखरा । रुपा गाउँपालिकामा खेलकुद, संस्कृति र नृत्यको उत्सव लाग्ने भएको छ ।
रुपा गाउँपालिकाले स्थानीय तह स्थापना दिवसको अवसर पारेर अन्तर स्थानीय तह भलिबल प्रतियोगितासहितको कार्यक्रम गर्न लागेको हो ।
फागुन २४ गतेदेखि संचालन हुने गरी अध्यक्ष कप खुल्ला भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागिएको हो । प्रतियोगितामा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट राष्ट्रिय खेलाडीहरुले समेत खेल्न पाउनेछन् ।
‘रुपाको पहिचान, सबै क्षेत्रमा समृद्धिको अभियान’ नारासहित काम गर्दै आएको गाउँपालिकाले ‘युवालाई खेलकुदतर्फ आकर्षित गरांै, स्वस्थ र समुन्नत समाजको निर्माण गरौं’ भन्ने उद्घोषका साथ खुला भलिबल प्रतियोगिता गर्न लागिएको अध्यक्ष नवराज ओझाले जानकारी दिए । गत वर्ष भीमाद गाउँपालिकाले उपाधि जितेको प्रतियोगितामा १८ स्थानीय तह सभागी थियो । यो वर्ष कम्तिमा २५ स्थानीय तहले भाग लिने ओझाले बताए ।
प्रतियोगितामा प्रथम हुने स्थानीय तहले १ लाख २० हजार रुपैयाँसहित ट्रफी मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन् । द्वित्तीय, तृत्तीय र शान्त्वना हुने स्थानीय तहले क्रमशः ९० हजार, ६० हजार र ३० रुपैयाँ ट्रफी मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन् । विभिन्न उत्कृष्ट खोलाडीहरुले समेत पुरस्कार पाउनेछन् ।
स्थापना दिवसकै अवसर पारेर गाउँपालिकाले सबै वडाका जातजातीको सहभागिता हुनेगरी सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शन गर्ने भएको छ । गाउँपालिकाको ७ वटै वडाहरुमा लोप हुन लागेका जातजातिको संस्कृति परम्परालाई जगेर्ना र संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ हरेक वडाबाट झाँकी प्रदर्शन हुने अध्यक्ष ओझाले जानकारी दिए ।
वडा नं. १ बाट बोटे जाति अनिवार्य सहभागी हुने गरी जम्मा ५ समूह, वडा नं.२ बाट दलित अनिवार्य सहभागी हुने गरी ४ समूह, वडा नं. ३ बाट कुमाल अनिवार्य सहभागी हुने गरी ४ समूह, वडा नं.४ बाट ठकुरी अनिवार्य सहभागी हुने गरी ४ समूह, वडा नं. ५ बाट गुरुङ र नेवार अनिवार्य सहभागी हुने गरी ५ समूह, वडा नं.६ बाट मुस्लिम अनिवार्य सहभागी हुने गरी ६ समूह र वडा नं. ७ बाट नेवार अनिवार्य सहभागी हुने ५ समूहसहित बृहत् रुपा गाउँपालिकास्तरीय झाँकी प्रदर्शन प्रतियोगिता हुनेछ ।
यस वर्ष पनि गाउँपालिकाले फागुन २७ गते नयाँ पुस्ताको अनिवार्य सहभागितामा झाँकी प्रतियोगिता गर्न लागेको छ । झाँकी लिएर आउने प्रत्येक समूहले ५ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम पाउने छन् भने प्रथम हुने समूहले ४० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउने छ । त्यसैगरी, दोस्रो र तेस्रो हुने झाँकीको समूहले ३० हजार र २० हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्ने अध्यक्ष ओझाले बताए । यो वर्षदेखि पालिकाभित्रका प्रतिभा पहिचान गर्ने अर्को कार्यक्रम पनि रुपाले थालनी गर्न लागेको छ । पालिकाले पहिलो पटक रुपा डान्स आइडल गर्न लागेको हो ।
स्थापना दिवसका अवसरमा ४ दिनसम्म गाउँपालिकाको केन्द्र भीरचोकमा उत्सव चल्ने उपाध्यक्ष लालसुब्बा गुरुङले जानकारी दिइन् । कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष नारायण गुरुङको संयोजकत्वमा खेलकुद मूल समिति र अन्य ८ उपसमिति गठन गरेर तयारी थालिएको छ ।